नेकपाको चुनौती र अवसर | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७५ जेष्ठ ५, शनिबार ११:४१ गते
दुई फरक धारको राजनीतिमार्फत उदाएका दुई कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकीकरण भएको छ । नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ । यस एकताले कम्युनिस्टहरु फुट्नमात्रै जान्दैनन्, जुटेर एकढिक्का पनि हुन सक्छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । विसं २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको १३ वर्षपछि फुट्न थालेको थियो । त्यो श्रृंखलाको क्रमभंग एमाले–माओवादी एकताबाट भएको छ । फरक धारका दुई कम्युनिस्टबीचको एकतालाई नेताहरुले कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एकीकरणका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस एकतालाई ऐतिहासिक र नयाँ युगको सुरूवातका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिमा लैजाने प्रण पनि दुवै नेताबाट व्यक्त भएका छन् । वाम गठबन्धन गरी चुनावमा होमिएका दुवै पार्टीले एकताका पक्षमा छ महिना लामो अभ्यास गरेका थिए । यसअघि भागबन्डा नमिल्दा पार्टी एकता होला र ? भन्ने सन्देहसमेत व्यापक भएको थियो । यद्यपि, भागबन्डा नै पार्टी एकताको निर्णायक आधार बन्न पुगेको हो भने त्यसले निश्चय पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन ।
नयाँ पार्टीका लागि कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । पार्टी सञ्चालनका लागि निर्णायक सचिवालयसँगै स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बने पनि पार्टीसँगै भातृ संगठनहरुको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म एकीकरण गर्न बाँकी छ । यसक्रममा जन्मिने असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु नेतृत्वका लागि अर्को चुनौती हुनेछ । आन्तरिक भागबन्डामा अल्झिँदै गर्दा तिनै नेताहरुले विदेशी शक्तिले एकता भाँड्न खोजेको आरोप लगाउन पछि परेनन् । अहिले कम्युनिस्ट एकताका लागि स्वदेशी, विदेशी कुनै पनि शक्तिले रोकेको छैन । नयाँ शक्तिशाली पार्टी गठन भइसकेपछि अब पनि विकासले गति लिन सकेन र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आउन सकेन भने कम्युनिस्टहरुले कुनै शक्तिलाई दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति पाउँदैनन् । अब आफ्नो विफलताको दोष अरुलाई थोपरेर जनताले विश्वास गर्ने छैनन् । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको कम्युनिस्ट सरकारले छिमेकीद्वय भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको रटान लगाइरहेको छ । चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि पनि यो वा त्यो बहाना गर्ने छूट पनि छैन । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय कम्युनिस्ट नेताहरुमा विचार, सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा स्खलन भई व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको स्वीकार गर्दै सत्ताको मात त्यागेर जनताको सेवामा लाग्ने उद्घोष गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष ओलीले नवगठित पार्टीलाई जेट विमानको संज्ञा दिएका छन् । एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहेको सन्दर्भ जोडिए पनि यो उनको दम्भ र व्यवहारको संयोजनमै मुलुक र स्वयं उनको नयाँ पार्टीको भविष्य निर्भर रहने छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको श्रृंखलाबाट पक्कै पनि नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जनादेश पाएर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरुले माक्र्सवाद र लेनिनवादजस्ता विफल अधिनायकवादी विचारलाई किन मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए ? त्यो सवालचाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ । उसो त, नेकपाले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै श्रेष्ठता हासिल गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता मान्ने, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्थालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । अहिले नयाँ पार्टीलाई काम गरेर देखाउने ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । मुलुकलाई अराजकता र दण्डहीनताको भुमरीबाट मुक्त गराउनु नै नयाँ पार्टीको पहिलो अग्निपरीक्षा हुनेछ ।